July 12, 2019 LOGINMAIL1500မှတ်ချက်များ
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အသင့်လျော်အချက်အလက်များရယူပါ Facebook ကို Login ဖြစ်စဉ်ကို. အောင်မြင်စွာ Facebook Account အားတီးပွီး, ဤဆောင်းပါးကိုဖို့ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ခြေလှမ်းပေးသည် Facebook ကအကောင့်ထဲမှာ Sign.
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင်အလွယ်ကူဆုံးပေးသည် Facebook ကို Login ဘို့ process ကို. အဆင့်များထွက်စစ်ဆေးနှင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးပြီးနောက်သင်အောင်မြင်စွာသင်၏အဖို့ login ပါလိမ့်မယ် Facebook ကအကောင့်ကို.
ဒါကြောင့်, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုမှခုနှစ်တွင် Sign စေရန်ကူညီပေးသည်သောဤသတင်းအချက်အလက်သေချာစွာဖတ်. လော့ဂ်မှ, သင်တစ်ဦးလိုအပ် username နှင့် Password ကို အရာသင်သည်သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါသင်ရလိမ့်မယ်.
Facebook က အမေရိကန်လူမှုမီဒီယာနှင့်လူမှုကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2004 Mark Zuckerberg ဟာအားဖြင့်. ထိုသို့ Menlo Park ရုံးချုပ်, ကယ်လီဖိုးနီးယား, U.S. Facebook ကထက်ပိုမိုခဲ့ 2.3 ဘီလီယံခန့်ကိုလစဉ်တက်ကြွအသုံးပြုသူများသည်. Facebook ကိုကမ္ဘာကအကောင်းဆုံးလူမှုကွန်ယက် service provider ကကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ်.
Facebook ကို Login လုပ်ငန်းစဉ် | အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်အဆင့်
ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်ခြေလှမ်းထွက် Check နှင့်အောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို log in သူတို့ကိုလိုကျနာ.
👉🏿ပထမဦးစွာ, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ www.facebook.com တရားဝင် Facebook ကို website မှာရိုက်ထည့်ရန်.
👉🏿 Now ကို, သင်၏ Email သို့မဟုတ်ဖုန်းနှင့် Password ပေးထားသောအာကာသအတွင်းဝင်.
👉🏿 Now ကို, မှန်ကန်စွာသတင်းအချက်အလက်များချပြီးပြီးနောက်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ “လော့ဂ်အင်” ကြယ်သီး.
👉🏿သင်ရဲ့ login ကို click အမျှသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုမှဝင်ပါလိမ့်မယ်.
👉🏿 Now ကို, သငျသညျ Facebook ကထောက်ပံ့ပေးအပေါငျးတို့သ features တွေကိုသုံးနိုင်သည်, နှစ်သက်.
ဤဆောင်းပါးသည်ကိုသင် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ Facebook ကို Login လုပ်ငန်းစဉ်. အလွယ်တကူဖို့ကဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ခြေလှမ်းထုတ်စစ်ဆေး Facebook ကအကောင့်ထဲမှာ Sign. အဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကို login ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်.
ဤဆောင်းပါးတွင်အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုမျှဝေရန်, သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းမှုရှိတောင်မှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေး. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုမှာပုံမှန် update ရ loginmail.online.
Facebook ကိုရဲ့ login ဘို့လုပ်ငန်းစဉ်ယှဉ်ပြိုင် Facebook အကောင့်ကိုမှခုနှစ်တွင် Sign
ယခင် Post မှ Gmail ကို Login Password ကိုနှင့်အသုံးပြုသူအမည် | ဝင်မည်အဘို့အပြီးအစီးလမ်းညွှန်
next Post စမတ်ထောင်မေးလ်ဝင်မည် | အပြီးအစီးလမ်းညွှန်